Farmaajo oo horey u qorsheeyay fashilka Shirkii Afisyooni | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo horey u qorsheeyay fashilka Shirkii Afisyooni
Wuxuu Xildhibanada isaga taageersan si gaar ah ula wadaagay qorshihiisa shirka Afisyooni habeenkii Talaadada kadib markii uu Villa Somalia kula kulmay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Keydmedia Online ayaa heshay macluumaad hoose oo sheegaya in Farmaajo oo Xildhibaanno isaga taageersan la wadaagey qorshaha fashilka Shirkii Afisyooni.
Madaxweynaha mudo-xileedkiisu dhamaaday ayaa u sheegay Xildhibaanada inuu fashilinayo Shirka kadibna uu mudo-kordhin labo sano ah sameysanayo, iyadoo uu u maraya Gollaha Shacabka oo horey gacanta ugu hayay Mooshinka waqtiga loogu dheeraynayo Farmaajo.
Xogtan waxaa sii xoojiyay in Wasiir Dubbe muuqaalkii uu shalay baahiyay ahaa mid horey loo duubey, oo sidoo kalena war-saxaafadeedka gacanta lagu hayay, iyadoo Villa Somalia baahisay isla markii uu shirka xirmay, oo madaxda aan huteeladooda gaarin.
Farmaajo ayaa Xildhibaanada uu la kulmay u sheegay inuu dalka sii xukumi doono illaa 2023, kadibna uu qaban doono doorasho u dhacaysa sida uu isaga rabo, islamarkaana uu hubo inuu kusoo baxayo tartanka.
Macluumaadka KON heshay ayaa sidoo kale xusaya inuu Farmaajo damacsan yahay in mudo-xileedka Madaxweynaha ka dhigayo shan sano, halkii horey afar sano ka ahaa, waxaana qorshaha uu fulin doonaa inta aysan dhamaan labada sano ee mudo-kordhinta.
Dalka wado halis badan ayaa cagta u saarey Farmaajo, waxaana lumay rajadii shacabka ee dowladnimada iyo dimuqraadiyadda, iyadoo waxa hadda la filayo ay tahay dagaal iyo qalalaase siyaasadeed.
Shirkii Afisyooni wuxuu ahaa rajadii ugu dambeysay ee laga qabay in heshiis looga gaaro khilaafka kadibna la qabto doorasho wadar ogol ah, oo si nabad ah ku dhacda, balse Farmaajo ayaa lugta ku dhuftay dedaalladii la sameeyay.
Mucaaradka wuxuu sheegay in Farmaajo uu isaga si shaqsi ah u qaadayo Mas'uuliyadda wixii dhibaato ah oo ka dhasha fashilinta Wadahadaladii socday iyo Shirkii Afisyooni.